Tsy ny famonjena voina sy ny fanomezan-dra, izay tena nahafantaran'ny maro azy ihany ny andraikitra sahanin'ny Croix Rouge Malagasy ato anatin'ny faritra Boeny fa mandray anjara amin'ny fanabeazana sy ny fahasalaman'ny tanora ihany koa izy ireo.
Tamin'ny taon-dasa ohatra, nampiditra rano fisotro madio tao amin'ny faritra fametrahana ireo zaza tsy ampy taona voatazona ao amin'ny fonjaben'i Marofoto ny Croix Rouge Malagasy.
Omaly 8 mey kosa, nisy ny fitiliana maimaimpoana, fandraisana ireo vehivavy hitily ny homamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranon-jaza. Teo ihany koa ny fizarana fanampiana ho an' ireo olona sahirana sy beazina ao amin'ny Croix Rouge eto Mahajanga.
Mahatratra 14.300 ireo mpilatsaka an-tsitrapo manerana ny Nosy ankehitriny.
Faritra 12 no efa misy ny sampana izay mitsinjara ho amin'ny Distrika miisa 120.
Drug Interaction Amoxicillin And Benzodiazepines Finasteride Can I Purchase Viagra Generico Bonifico [url=http://orderlevi.com]why is levitra so expensive[/url] Viagra 100mg Filmtabletten Wirkung Cialis Rezeptpflichtig Osterreich
Priligy Quanto Tempo Prima Amoxil Et Finasteride Generic Uk [url=http://howtogetvia.com]generic viagra[/url] Generic Priligy Kaufen
samedi, 28 octobre 2017 11:23
Buy Avodart Brand [url=http://levitrial.com]vardenafil vs viagra[/url] Tadalafil Tablets Kamagra Lilly Order Female Viagra Online
mercredi, 25 octobre 2017 23:06
Lexapro Decadron Pills No Prescription [url=http://levibuying.com]buy levitra on line[/url] Achat Alli Commentaire Achat Cialis France Priligy Spray
jeudi, 12 octobre 2017 04:33
Nolvadex Bodybuilding [url=http://cheapviapill.com]viagra[/url] Amoxicillin Trihydrate Powder
vendredi, 07 juillet 2017 21:44
Lioresal Commander 25mg [url=http://cialonline.com]viagra cialis[/url] Como Hacer La Propecia
samedi, 01 juillet 2017 18:27